Ukuphupha ngeSafari Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Iphupha malunga neSafari. Amaphupha abonisa iimpawu ezingaziwayo ngathi, esi sikhokelo siza kukunceda utolike amaphupha.
Igama elithi "safari" ekuqaleni livela kulwimi lwesiSwahili kwaye lithetha "uhambo" apho. Nangona kunjalo, lishishini lalo naluphi na uhlobo. Nokuba uhambo olude lubizwa ngokuba yi "safari" kolu lwimi.
Ngexesha lekoloniyali, igama elithi safari laye lamkelwa nakwamanye amazwe nakwiilwimi. Eli gama laba ligama kuhambo oluya e-Afrika. Namhlanje eli gama lisasetyenziswa, kodwa injongo yolu hambo ngoku ikakhulu kukujonga kunye nokufota izilwanyana zasendle hayi ukuzizingela.
1 Uphawu lwephupha «iSafari» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iSafari» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iSafari» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iSafari» - ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha «iSafari» lunakho, ngokokuchazwa kwephupha jikelele, umnqweno wamaphupha isenzo sodelo-ngozi. Oleleyo ufuna ukwahlukana nesiqhelo kubomi bakhe bemihla ngemihla kunye nemisebenzi yakhe.
Rhoqo, nangona kunjalo, uhambo oluya engqondweni luye lwasondela nalo mfanekiso uphuphayo. Oku kuthetha ukuba umphuphi kufuneka ajongane nemixholo ethile engekho zingqondweni, kuba bafuna ukuqhubela phambili kwinqanaba lokuqonda ngalo mzuzu.
Ukuba umphuphi uyahamba ephupheni lakhe, oku kunokumcela ukuba anyamekele ngakumbi iimvakalelo zakhe kunye neemvakalelo zakhe. Ukongeza, le meko yephupha inokufuzisela Ukulangazelela ukukhula ubuntu bakho. Ukuba ubona abanye abantu ephupheni kwi-safari, kuya kufuneka unike ingqalelo ngakumbi kwiimvakalelo zabanye abantu.
Ukuba ephusheni ukuzingela kungaphambili, umntu oleleyo kufuneka aqonde ukuba isenzo sakhe ebomini bakhe sisekwe kwi injongo ecacileyo. Uhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha, kunomdla ukwazi ukuba zeziphi izilwanyana ezazizingelwa ebuthongweni bazo. Ukuzingela amarhamncwa okanye iigorila kunokubonisa ubunzima okanye iingxaki njengomfanekiso wephupha, obangelwa liphupha.
Uphawu lwephupha «iSafari» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, isimboli yephupha "safari" inokubonisa umnqweno wokulala kwi-adventure. Angathanda ukuba ngakumbi ekuhambeni ebomini kwaye afumanise el mundo. Nangona kunjalo, iphupha lakhe kufuneka limenze ukuba azi ukuba ugcina umgama wakhe ukuba into iya kuba yinto enomdla kakhulu kuye okanye inomngcipheko omkhulu kakhulu. Le ndlela yokuziphatha inokuzibonakalisa kokubini kwinqanaba labucala nakwingcali.
Ukuba iphupha ngokwakhe kuhambo lokuzingela eAfrika ephupheni lakho, ibonisa iminqweno ekuqhubela ebomini. Mhlawumbi kuya kufuneka uphinde uziqwalasele kungekudala kwaye usete iinjongo ezintsha.
Ukuqwalaselwa kwezilwanyana zasendle ngexesha lokuhamba kuguqulela uhlalutyo lwengqondo ngephupha njengophawu lwe amandla abalulekileyo ukuba umntu ophuphayo angafikelela ebomini.
Ngokunxulumene nale meko yamaphupha, kunokuba ngumdla ukwazi ukuba zeziphi izilwanyana ezibonwayo xa zilele. Ngaba ziingonyama okanye iingwenya? Okanye ngaba yayifana neendlulamthi, iinkawu, okanye iindlovu? Imiba yesimboli yamaphupha ngokulandelelana inokunika imikhondo ngakumbi kumyalezo wephupha.
Uphawu lwephupha «iSafari» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika i-safari ngengqondo yohambo kwaye, ke, njengokubhekisa kwi indlela yokomoya lowaphuphi.
Ngamanye amaxesha, uphawu lwephupha lunokubhekisa kuphela kwicandelo elithile lendlela yobomi. Oku kufuneka kufumaneke ngokusekwe kwiimeko ezihamba kunye nayo.